Blockchain iphrojekthi DFINITY Stiftung kuphakamisa $ 61M - Blockchain Izindaba
A engenzi nzuzo ukuthi ufuna ukuthuthukisa internet endlalekile ngokusebenzisa blockchain uye wasiphakamisela $61 million ngo inkece U.S. ibhizinisi dolobha ngokuqinile Andreessen Horowitz futhi uthango Isikhwama Polychain Capital, ke ngoLwesithathu.
DFINITY Stiftung ufuna ukudala lokho ekubiza ngokuthi "ikhompyutha internet,"Inethiwekhi evulekile ukuthi ukhonza njengelungu virtual mainframe ikhompyutha esikhulu Internet. Lokho sivumele izinguqulo endlalekile kwabaningi inthanethi ubuchwepheshe ezinsizakalweni ezifana Uber, eyinqolobane, ne-eBay, ngokusho kwesitatimende inkampani.
Ryan Zurrer, ibhizinisi umlingani Polychain Capital, ngokuthi ubuchwepheshe i "emisha esiphoqayo kakhulu" futhi wathi inkampane yakhe "ukwenza dolobha ukuthunyelwa yethu elikhulu kunawo wonke."
"Okwamanje, sibhekile kanzima kanjani lokwanuleka ukusatshalaliswa,"Kusho umengameli kanye nososayensi abakhulu DFINITY sika Dominic Williams. "Sikuphathele funa amakhulu ezigidi zokufuna ukubamba iqhaza kule phrojekthi."
Chainalysis - inkampani owabhubhisa yokufihla Bitcoin
Ekuqhubeni amaningi ...
Umlawuli Swiss bahlakulele izimfuneko ICO
Mayelana ne-t ...
Thumela Previous:Kanjani le ndaba yokuvinjelwa ukukhangisa mfihlo Facebook kuzosiza umkhakha
Thumela Landelayo:Indlela yokwakha Crypto Exchange
May 11, 2018 ngesikhathi 6:28 AM